Xildhibaanno Dood Ka Keenay Hannaanka Qeybinta Guddiyada Golaha Shacabka – Kalfadhi
August 23, 2018 Kalfadhi
Xildhibaanno ka tirsan Golaha Shacabka ayaa marar kala duwan oo ay ka hor hadleen Golaha Shacabka waxa ay dhaliileen hannaanka loo maray qeybinta guddiyada Golaha Shacabka, iyagoo ku tilmaamay in aysan waafaqsaneyn xeer hoosaad-ka Golaha Shacabka.
Xildhibannadaas waxaa ka mid ah C/fitaax Qaasim iyo Maxamed Cumar Dalxa.
Xildhibaan C/fitaax Qaasim waxa uu sheegay in aan marnaba lagala tashan habka loo maray qeybinta guddiyada golaha shacabka, isagoo sheegay in deegaannadiisa uusan qofna ku matalin 15-ka guddi ee Golaha Shacabka.
Halkaan ka daawo Xildhibaan C/fitaax Qaasim oo ka hadlaya arrinkaas.
Sidoo kale Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa ayaa isna qaba in khibaradda xildhibaannada iyo waxa uu xildhibaan walbo yaqaanno ama soo bartay in aan lagu dhisin guddiyada, taas oo keeni karta in sidii loo baahnaa aysan mudanyaashu u shaqeyn.
Waxa uu Dalxa si cad u sheegay in guddiyada hadda dhisan aysan ku laheyn wax matalaad ah.
Halkaan ka daawo Xildhibaan Dalxa oo ka hadlaya arrinkaas.
Kalfadhiga Afaraad marka uu farmo 10-ka bisha Sibteembar waxyaabaha ugu hoorreeya ee xildhibananadu ka doodi doonaan waxaa ka mid ah xeer-hoosaadka Golaha Shacabka oo qorshuhu ahaa in ay meel mariyaan Kalfadhihii saddexaad.